लापरवाही नगर - Purwanchal Daily
२८ श्रावण २०७७, बुधबार १२:४३ मा प्रकाशित
सरकारी कार्यालयहरु नै कोरोना संक्रमणको वाहक बनिने संकेत देखिएको छ । सरकारले कार्यालयहरु खोलेर सेवा प्रवाह गर्ने नाममा पैसा उठाउन ताकेता गरेपछि ती कार्यालयहरुमा भीडभाड अत्यधिक हुन थालेको समाचारले त्यस्तै दुष्परिणामको संकेत गरेको हो । तिनै कार्यालयहरुले आवश्यक सावधानी नअपनाएकोले संक्रमणको जोखिम उच्च हुने सम्भावना रहेको त्यहाँ बाध्यताबस पुगेका सेवाग्राहीले बताएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कै आसपासमा रहेका आन्तरिक राजश्व, मालपोत, नापी कार्यालयहरुले सामान्य सुरक्षा सावधानी समेत नअपनाउनु लापरवाहीको हद हो ।
सरकार आफैंले भौतिक दूरी कायम गर्न, साबुनपानीले पटक–पटक हात धुन, सेनिटाइजर प्रयोग गर्न, मास्क अनिवार्य लगाउन निर्देशन दिएको छ । भीडभाड नगर्न, भीडभाडमा नजान, भीडभाड हुने खालका धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक गतिविधि सञ्चालन नगर्न सुझाएको छ । तर, सरकारकै अङ्गका रुपमा रहेका ती कार्यालयहरुले भने जनस्वास्थ्यको मापदण्ड समेत उल्लघंन गरिरहँदा नियामक निकायले देखेको नदेखै गर्नु सर्वसाधारणको स्वास्थ्य माथिको खेलबाड हो । महामारीका समय सामान्य सतर्कता, सजगता र सावधानी अपनाएर पनि अकाल मृत्युबाट जोगिन सकिन्छ– यो सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र विज्ञहरुले दिएको निर्देशन र सुझाव हो । तर, त्यही निर्देशनको अवमानना भइरहेको छ भने सर्वसाधारणबाट कस्तो अपेक्षा गर्न सकिएला !
कोरोना एकातिर समुदायमा फैलिंँदैछ, अर्कातिर ‘छेकबार’ लगाउनुपर्ने निकायहरु थोरै जागेको आत्म अनुशासन भत्काउन उद्धत छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय होस् वा अन्य कार्यालयहरु जहाँ सेवाग्राहीको अत्यन्त भीडभाड हुन्छ तिनलाई कोरोना नियन्त्रण नभएसम्म बन्द गरिनु पर्दछ । स्वास्थ्यभन्दा ठूलो वस्तु अरु केही हुँदैन भन्ने सत्यलाई आत्मसात गरी स्वास्थ्य रक्षा पछि बाँकी काम गर्ने मानसिकता कायम नगर्ने, कोरोना संकट बोध नगर्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्नुपर्ने बेला सरकार आफैं भीडभाड गराउन लागेको छ । अत्यन्त धेरै सुरक्षा घेरामा बसेका नेता र विभिन्न सेवामा रहेका कर्मचारीहरु पनि भाइरसको निशानामा आइसकेको सन्दर्भलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने यसबाट कोही जोगिने छैन । त्यसैले सबैमा आत्म अनुशासन र सरकारमा विषयको गाम्भीर्यलाई बोध गर्ने बुद्धि र क्षमता विकास होस्, अन्यथा कसैको कल्याण हुने छैन ।
Previous articleकसरी हुर्कँदैछन् नयाँ पुस्ता ?
Next articleप्रचण्डका तीन विकल्प : ओलीको एक विकल्प